Somaliland Oo Indhaha Ku Haysa In Dekedda Berbera Ay Kaalin Muhiim Ah Ka Qaadato Ganacsiga Badda Cas | Berberatoday.com
Somaliland Oo Indhaha Ku Haysa In Dekedda Berbera Ay Kaalin Muhiim Ah Ka Qaadato Ganacsiga Badda Cas
Hargeysa(Berberatoday.com)-Wakaaladda wararka ee AFP ayaa maanta daabacday warbixin ay kaga hadashay sida Jamhuuriyadda Somaliland ugu heellan tahay inay dekedda Berbera noqoto marinka ugu muhiimsan ee ganacsigabadda cas.
AFP waxay intaas ku dartay in Somalilandrejaynayso sidii ay u noqon lahayd mid ka mid ah marinnada ugu mashquulsan ee caalamka oo ay ka heli doonto shaqo abuur, isla markaana maalgashiga dekeddu badhi-taarayso aqoonsiga caalamiga ah ee ay JSL baadi-doonaysay 27kii Sannadood ee la soo dhaafay.
Wasiir Sacad Cali Shire waxa uu tilmaamay in heshiiska ay la galeen shirkadda DP World yiddidiilo u tahay kasbashada maalgashiga caalamiga ah ee Somaliland doonayso. Wakaallada AFP waxay sheegtay in himilada Somaliland kor u kacday bishii March ee sannadkan, ka dib markii dawladda Itoobiya maalgashiga dekedda Berbera laga siiyey boqolkiiba 19%.
Shirkadda DP World ayaa gelinaysa Somaliland lacag lagu qadaray 442 milyan oo doolar oo ay ku ballaadhinaysodekedda Berbera, waxaanay wejiga horebilaabaysaa Bisha October ee sannadkan, waxaana lagu kordhinayaa dekedda 400 oo mitir oo laba jibaaran, waxaanu soconayaa dhismahaasi 24 Bilood. Wakaallada AFP waxay intaas ku dartay in Dawladda Somaliland ay Imaaraadka carabta magaalada Berbera ka siisay saldhig millatari oo ay ku heshiiyeen muddo 25 sannadood ah.